Waalidiinta carruurtii Yaman ee lagu laayay duqeyntii isbahaysiga Sucuudiga hoggaamiyo oo la yaaban sababta looga aamusay arrintaasi - BBC News Somali
Waalidiinta carruurtii Yaman ee lagu laayay duqeyntii isbahaysiga Sucuudiga hoggaamiyo oo la yaaban sababta looga aamusay arrintaasi
Isbahaysigani oo dowladda Yaman ku taageeraya dagaalka ay kula jirta fallaagada Xuutiyiinta ayaa qirtay in uu "khalad" ka dhacay waxa uuna ballan qadaay in la "ciqaabayo" dadkii lahaa mas'uuliyadda weerarkaasi.
Waxay ay ahayd xilli aroor ah oo aysan wali soo bixin cadceedda, 9-ka bisha Agoosto, markii Dr Cali Al-Taa'ifi uu ka soo baxay qolka qalliinka ee isbitalka Al-Talh oo ku yaal magaalada Sacda ee fallaagadu ay ka taliso.
"Waxaan sugeynay in xilli kastaa ay dhici karto duqeyn, ha ahaato suuqa, masjidka ama xitaa meelaha kale ee ay dadku ku kulmaan sida aaska oo kale," ayuu yir Tayib.
Xigashada Sawirka, ZAID TAYYIB
Muuqaalkaasi ayaa sidoo kale waxaa laga dhex arkayay carruur faraxsan oo akhrinaya aayado Qur'aan ah oo uu macallinkooda la jooga.
'Xanuun aanan laga sheekeyn karin'
Tayib oo aad u argagaxsan ayaa soo aaday meesha lagu weeraray carruurta. "Waxaan dareemay xanuun, xanuun aan laga sheekeyn karin," ayuu yiri.
Dhibbaneyaal da' yar
Wax yar kaddib waxaa dhaawacyadii la geeyay isbitaalka waxaana Dr Taa'ifi uu ku khasbanaaday in uu u gurmado carruurta dhaawaca ahi. Waxa uu aad uga xumaaday dhibka dhacay iyo carruurta da'da yar ee ay masiibadu ku habsatay.
Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan, Dr Taa'ifi waxa uu ka shaqeynayay mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Sanca oo ay fallaagadu maamusho waxa uuna qalliin ku sameeyay dad aad u tiro badan oo dhaawacyo ka soo gaareen duqeymaha isbahaysiga Sucuudiga uu hoggaamiyo.
Hay'adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa xaqiijisay in isbitaalka Al-Talh la soo gaarsiiyay meydadka 29 carruur ah.
Dhanka kale, hay'adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa shaacisay magacyada iyo da'da 34 qof oo ku dhintay duqeyntaasi, waxaana magacyadaasi ku jiray 25 carruur ah iyo saddex macalin oo saarnaa baska. Sidoo kale magacyada la shaaciyay waxaa ka mid ahaa cannug, nin macalin ahaa iyo laba nin oo kale oo la sheegay in ay taagnaayeen gudaha suuqa.
'Bartilmaameed sharci ah'
Inakstoo ay caddeyd in carruur lala eegtay, haddana isbahaysigani uu Sucuudiga hoggaamiyo ayaa markii hore ku adkeystay in uu ahaa "tallaabo milatari oo sharci ah isla amrkaana waafaqsan shuruucda calamiga ah ee bani'aadannimada".
Afhayeenka isbahaysigani korneel Turki Al-Malki ayaa sheegay in duqeyntaasi lala eegtay fallaagada Xuutiyiinta oo mas'uul ka ahaa gantaal kuwa riddada dheer ah oo laga soo riday gobolka Amran, kaasi oo hannaanka difaaca gantaallada ee Sucuudiga oo fashiliyay.
Maxamad Xajar oo ah mas'uul ka tirtsan wasaaradda caafimaadka ayaa ku gacan seyray eedeymaha ah in carruurtaasi loo adeegsanayay in looga gaashaanto duqeymaha isbahaysiga oo rag Xuutiyiinta ka tirsan ay ku dhex dhuumanayeen.
Wasaaraddu oo ay Xuutiyiintu maamulaan aya sheegtay in Maxamed Siteen uu ahaa macallin 28 jir ah oo ka tirsanaa dugsi Quraanka carruurtani dhiganayeen. Arrintaasi waxaa sidoo kale BBC-da u xaqiijiyay waalidiinta carruurta dhiganayay dugsigaasi iyo carruur ay wareysatay hay'adda Human Rights Watch.
Dr Taa'ifi iyo Dr Cabbas Al-Mutawakil oo ah madaxa qeybta xaaladda deg degga ee isbitaalka Al-Jamhuuri ee magaalada Sacda ayaa waxa ay sheegayaan in dadkii ay daweeyeen uusan ku jirin xitaa hal qof oo ka tirsan Xuutiyiinta.
Warbixinta kooxda gaarka ah ee isbahaysigu u saaray baaritaannada weerarkaasi ayaa sheegay in isbahaysigu uu diyaar u yahay ilaalinta shuruucda caalamiga ah ee dhanka dagaalka balse khubaro ka tirsan hay'adda xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ay rumeysan yihiin in shakhsiyaad ka tirsan isbahaysigani ay geysteen weerarro lid ku ah shuruucda caalamiga ah isla markaana u digmo dambiyo dagaal.
Hay'adda Human Rights Watch iyo shabakadda Bellingcat ayaa labaduba sheegay in duqeyntaasi loo adeegsaday gantaal nooca GBU-12 Paveway oo ay sameysay shirkadda Lockheed Martin ee hubka u shameysa wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka.
Balse dowladda Mareykanka iyo shirkadda Lockheed Martin ayaa xaqiijiyay in gantaalkaasi loo adeegsaday duqeyntaasi. Waxaase dhanka kale soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo doorka quwadaha reer galbeedku ku leeyihiin colaadda dalka Yaman.
TOOS Muxuu yahay xafiiska ay la wareegtay Taalibaan ee aadka loogu dhalleecaynayo?
Muxuu yahay Gujiska xambaara hubka Niyuukleerka, sidee ayuuna u shaqeeyaa?
Taariikhda hogaamiyihii ugu mudada dheeraa Aljeeriya ee geeriyooday